အင်ဂျင် (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အင်ဂျင် (၂)
Posted by ကြောင်လေး on Sep 23, 2012 in Creative Writing | 10 comments
“ဒါဆိုလဲမယ်ဆရာရယ်… အဲဒီပင်နယံ(gear)တွေကိုအကုန်လဲပစ်မယ်၊ ဟိုတစ်ခါကပိုက်ဆံမလောက်လို့ ပြန်သုံးထားတာ……. ဒီတခါဂျင်ဒေါင်းအော်ဒဂျင်(original)တွေဝယ်လဲလိုက်တော့မယ်……”
“ဟ….မောင်ကြောင်ရဲ့ မင်းပင်နယံအစုံလိုက်လဲလိုက်ရုံနဲ့ အင်းအင်ဂျင်ကောင်းသွားမယ်ထင်လို့လားကွ..”
“ဟင်…..စက်ဆရာပြောတော့ ကော်ပရေးရှင်းကောင်းတယ်၊ ရိန်းနဲ့စလစ်ကောင်းသေးတယ်ဆို……မိန်းဘယ်ရင်လဲသုံးလို့ရနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ ဒီဂီယာတစ်စုံလဲလိုက်ရင်မကောင်းနိုင်ဘူးလား………”
“ခဏတော့ကောင်းမှာပေါ့…….ဒီပင်နယံတွေ ဘာလို့ ဒီလောက်စားသွားသလဲဆိုတဲ့အပစ်ကို မရှာတော့ဘူးလား……..ဒီတိုင်းပြန်လဲထည့်လိုက်ရင် ဒီပင်နယံတွေ ဒီလိုပဲပြန်စားမှာပေါ့……”
“မင်း ပင်နယံတွေနဲ့ ကာဗာထဲကိုသေချာကြည့်စမ်း…..ဘာထူးသလဲလို့”
“ပင်နယံနဲ့ ကာဘာထဲမှာ ဆီက ရွှဲမနေဘူး၊ နဲနဲပဲရှိတယ်၊ ဆီခြောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်……”
“မဟုတ်ဘူးကွ…..ဒီနေရာမှာ ဆီဆိုတာ ချောဆီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်(engine oil) ကိုပြောတာ၊ အလွယ်တကူ ဆီတို့၊ဆီလိုင်းတို့ ဆီပိုက်တို့၊ဆီပန့်တို့ အဲလိုပဲပြောမယ်……..အင်ဂျင်တစ်လုံးမှာရှိတဲ့ အစ်ိတ်အပိုင်းတွေဟာ သံကိုသံခြင်း ကြိတ်ပြီးလည်နေကြတာကွ…ဟုတ်တယ်မလား”
“အဲဒီတော့ သံအချင်းချင်းပွတ်လည်တဲ့အခါမှာ ကြာလာရင် အပူတွေထွက်လာမယ်၊ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် သံတွေစားလာမယ်၊ပါးလာမယ်ကွာ၊ အဲဒီတော့ ရေရှည်လည်နိုင်အောင် ချောဆီထည့်ပေးရတယ်လေ..လူတွေတောင် ချောဆီကြိုထွက်ပေးရတာ မင်းသိတယ်မလားဟဲဟဲ……”
“လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုချောဆီတွေရောက်ဖို့လိုတယ်….အဲဒီတော့ သံ သံချင်းပွတ်တိုက်နေတဲ့နေရာတွေ ဂီယာစွယ်တွေပေါ်ကို ချောဆီရောက်ဖို့ အင်ဂျင်အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ ကရိုင်းကစ်ထဲက ဆီတွေကိုဆီပန့် (oil pump) ကနေစုပ်ယူပြီး ဆီလမ်းကြောင်းတွေကနေ ပို့ပေးတယ်၊ အဲဒီဆီလမ်းကြောင်းတွေက ပိတောက်အိုး(cylinder block)ထဲကနေသွားတယ် အင်ဂျင်အမျိုးအစားနဲ့တည်ဆောက်ပုံပေါ်မူတည်ပြီး တချို့နေရာတွေကို ပိုက်တွေနဲ့သွားတာလည်းရှိတယ်။ လိုအပ်တဲ့နေရာကိုလိုအပ်သလို အချိုးအစားနဲ့ မျှမျှတတရောက်ဖို့လိုတယ်။ သေးသေးလည်းသေးသေးအလျှောက်၊ကြီးကြီးလည်း ကြီးကြီးအလျှောက် လိုအပ်ကြတာပဲ… အေးဆီပန့်မကောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆီပို့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေ မကောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ် ဆီပို့စံနစ်မှာကြားထဲမှာတစ်ခုခုအားနည်းချက်ရှိနေရင်…..ဆီရောက်သင့်တဲ့နေရာကိုရောက်သင့်သလောက်မရောက်ပဲ သံအချင်းချင်း ကြိတ်ပြီး စားကြမှာပဲ….. အဲဒီတော့ မင်းအင်ဂျင်ဆီပို့တဲ့စံနစ်ကိုပြန်စစ်ဆေးဖို့လိုလ်ိမ့်မယ်……”
“ကရိုင်းနဲ့ဘယ်ရင်တွေကြားမှာ အင်ဂျင်ဝိုင်တစ်ထုစာပဲခြားထားတာ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ကလည်းသတ်မှတ်တဲ့ အပစ်နှုန်းအတိုင်းရှိနေဖို့လိုတယ်…..ဆီပန့်ကလည်းလိုအပ်တဲ့ပရက်ရှာအတိုင်းတွန်းနိုင်ရမယ်…… ပန့်ကတွန်းပေးနေတာကလည်းနဲ…..အင်ဂျင်ဝိုင်ကလည်း ကျဲ……ဘယ်ရင်နဲ့ကရိုင်းကြားမှာလည်းလိုအပ်တာထက်ပိုချောင်နေတော့ အဲဒီမှာလျှံထွက်တာများပြီး ဆီပရက်ရှာကကျ၊ ဟိုအဖျားအနားက ပင်နယံတွေ ဆီအရောက်နည်းတော့ ပင်နယံတွေ စားတာပေါ့ကွာ……”
“ပင်နယံတွေစားတော့ တိုင်မင်ကမမှန်……တိုင်မင်မမှန်တော့ နော်ဇယ်က ပန်းပေးတဲ့ဒီဇယ်ဆီက အကုန်မလောင်၊ မလောင်တော့ စလစ်နဲ့ ရိန်းကြားမှာ ဒီဇယ်ရောက်ပြီး ကြာရင်စလစ်တွေ ရိန်းတွေပါစားလာမယ်၊ ကော်ပရေးရှင်းတွေကျပြီး ဆွဲအားလည်းကျလာလိမ့်မယ်……
“စက်ဆရာရယ် ကျနော်က ပိုက်ဆံသိပ်မပြေလည်တော့ အင်ဂျင်ဝိုင်ကောင်းကောင်းလည်းမသုံးနိုင်ဘူး၊ ဟိုတခါစက်ကိုင်တုန်းကလည်း ပိုင်ရှင်နဲ့ ညှိမရလို့ ဆီပန့်(oil pump)နဲ့ ဘယ်ရင်တွေ မလဲလိုက်မိဘူး…..”
“အေး အဲဒီကောင်တွေမကောင်းရင်တော့ ဆီလိုအပ်တဲ့နေရာကိုလိုအပ်သလို မှန်မှန်ကန်ကန်မရောက်နိုင်ဘူး၊ပိုက်ဆံမရှိလို့ဆိုပြီး သုံးသင့်တာကိုမသုံးရင် ရေရှည်ခံမှာမဟုတ်ဘူး၊ စက်ထဲမှာရှိတဲ့အစိပ်အပိုင်းတိုင်း သူတို့ထမ်းနေရတဲ့ဝန်နဲ့ အချိုးညီတဲ့ ဆီရဖို့တော့လိုတယ်ကွ အဲလိုမရရင်တော့ ဟိုကပျက်လိုက်၊ဒီကပျက်လိုက်၊ ဟိုတစ်ခုလဲလိုက်၊ ဒီတစ်ခုလဲလိုက်နဲ့ အစသတ်မှာကိုမဟုတ်ဘူး…ဒီဟာကောင်းတော့ ဟိုကလို၊ဟိုကကောင်းတော့ဒီကမကောင်းနဲ့ စက်ရုန်းအားလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းပဲ့ထောင်လည်း ရှေ့ကိုတက်မှာမဟုတ်ဘူးကွ….. စက်ပြင်ရလို့ငွေကုန်တဲ့အပြင် အော်ဒါမလိုက်ရတော့ဝင်ငွေလည်း ဆုံးရှုံးတာပေါ့ကွာ”
“သဘောပေါက်ပါပြီဆရာရယ်……ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီနေ့ အော်ဒါတစ်ခုလွတ်သွားတယ်ဆရာ…… မောင်းမယ်ဆိုရသေးပေမဲ့ ဒီရက်စက်မကိုင်ဖြစ်ရင် ပုံမှန်ဖောက်သည်တွေပျက်မှာစိုးလို့ ဇွတ်မှိတ်ပြီး ပြင်ရတော့မယ်……စက်ဆရာလိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ဟာတွေသာလုပ်ပါတော့ ဆရာ…… ကောင်းဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဆရာရယ်”။ ။
အဲဒီ အခန်းဖြတ် ။ ဘယ့်နှယ့်ဗျာ ချော်ကုန်တော့မှာပဲ
ကျုပ်ညီအရင်းကိုယ်တိုင် သူ့ဆိုင်ကယ်လေးကို အင်ဂျင်ဝိုင် လုံးဝမလဲပဲ ၇လလောက် ပေစီးတာ မိန်းဘောတွေကြွပြီး ဘားတံတွေပါကောက်ကုန်တယ် ၂၀၀၂တုန်းက
ဆိုတော့ဗျာ… as small cat say , we must check our engine fluid weekly !
တရုပ်နီ ငါးခြောက်တို့ ဆယ့်သုံးကောင်တို့ မှာ လီဗာတင်လိုက်လို့ အင်္ဂျင်ခါတာတွေက
ပျက်ရင်ပျက်တာကိုအရင်မပြင်ပဲ သက်တမ်းမကုန်ပဲပျက်တာလား ဘာကြောင့်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းမှန်ကိုရှာတွေ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
pully ၀င်ရိုးပေါက် အလယ်ဗဟိုမကျခြင်း၊ (ပူလီ ကြိုးကိုဆွဲဆောင့်သလိုဖြစ်ပြီးသက်တမ်းတိုတတ်ပါတယ်။)
မော်တာနှင့်ပူလီ alignment မမှန်ခြင်းတို့ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။
အင်ဂျင်ဝိုင်ကလည်း ဓါက်ဆီအင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဝိုင်ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပါတယ်။
ဒီဇယ်တွေဈေးကောင်းရင်တခါတရံ ဓါက်ဆီတွေကိုဒီဇယ်ထဲရောရောင်းတတ်ပါတယ်။ ဒီဇယ်ထဲဓါက်ဆီရောမရောစမ်းဖို့အတွက် ဗူးအဖုံးတခုထဲကို အနည်းငယ်ထည့်ပြီးမီးရှို့ကြည့်ပါ။ မီးစွဲရင် ဓါက်ဆီရောပါတယ်။ဒီဇယ်စစ်စစ်ဆိုရင်မီးမစွဲပါ။ အဲဒီရောတဲ့ဆီမျိုးဝယ်မိရင် အင်ဂျင်သက်တမ်းသိသိသာသာတိုတတ်ပါတယ်။
ပူလီ လိုင်းအတွင်း အနာလေးများ ဗြုတ်လေးများ ရှိနေရင်လဲ ကြိုးစားတာ အရမ်းမြန်ကြောင်းပါ
ဦးဦးပါ >>>>စက်ဆရာတော့မလုပ်ပါနဲ့၊ စာဇရက်ဖြစ်မှာစိုးလို့….
ဦးပေ >>>> ဦးပေတင်ပေတာ မဟုတ်ပဲ ညီကလဲပေတာပဲလား….
ဘပု >>>> အဲသလိုဟုတ်သလားဆိုတာ စက်ဆရာကိုသွားမေးလိုက်ဦးမယ်….
ဦးနေးချား >>>> ပျက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပြင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါ….
ဖို့ မကြိုးစားတဲ့ ၀ပ်ရှော့ဆရာတွေအားကြီးပဲ…
အချိန်မပေးနိုင်ရင်တော့ အင်္ဂျင်ကိုအလုံးလိုက်သာလဲ ပလိုက် ….. အချိန်ကုန်သက်သာသလို စိတ်ချမ်းသာတယ် ….. နောက်တစ်ခုက အင်္ဂျင်ကိုင်မယ်ဆို စက်ဆရာကို ဟိုဟာချွေဒီဟာချွေခိုင်းဆိုရင် ပျက်အစဉ် ပြင်မရပဲဖြစ်ဦးမှာပဲ …..
လက်သမားဆရာ စက်ဆရာ အူးကြေးလောင် ပါကလား…
လောလောဆယ် ကျော့်မှာတော့ အောင်တစ်ရာ့ရှစ်ကွက် ဗုဒ္ဓစက်ပဲ ရှိသေးပေမဲ့
စက်ဝယ်ဖြစ်ရင် ဆီလိုတယ် ဆိုတာလေး..သတိချပ်သွားပါရဲ့ဗျား..
ဦးကြီးမိုက်>>>စက်ပြင်တာဖြစ်ဖြစ် မီးပြင်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာ၊ ပြင်ရမဲ့နည်းလမ်းရှာ၊ ပြီးဖြေရှင်းရင်သက်တမ်းကုန်အောင်သုံးရတာပေါ့
ခိုင်ခိုင်>>> အသစ်လဲဖို့ဆိုတာ စီးပွားရေးအခြေအနေကြည့်ရဦးမယ်လေ
ကပေါက်ဖော်>>>စက်ဝယ်ရင်ဆီလိုတယ်ဆိုတာထက်၊ ဆီရောက်သင့်တဲ့နေရာတိုင်းကိုရောက်သင့်သလောက်ရောက်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တာလေးပြောရရင် ပစ်စတင်မှာ မီးရိန်း(compression ring )နဲ့ ဆီရိန်း(oil scraper ting)ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်၊ ကွန်နက်တင်းနဲ့ ဂန်ဂျီပင်ကြားကကျလာတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ဆီရင်းက ပြန်ခြစ်ယူပြီး စလစ်နောက်ကျောကနေ ကရိုင်းကစ်ထဲပြန်ချတယ်၊ ((အဲဒီကောင် စားနေရင်)) အရမ်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်၊ အင်ဂျင်ဝိုင်က ရှေ့ကိုပါသွားပြီးမီးဖြစ်တဲ့အထဲ အိတ်ဇောအ၀မှာ ဆီဂျီးတက်တယ်၊ သတိမထားလို့ရှိရင် စက်ထဲကအင်ဂျင်ဝိုင်တွေမြန်မြန်ကုန်တယ်၊ သိပေမဲ့အခြေအနေအရမှေးနေရတယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်ဝိုင်ခဏခဏဖြည့်ရတယ်၊ စီးပွားရေးမကောင်းတော့ ဆီကောင်းလောက်လောက်ငှငှမကျွေးနိုင်တော့ မသန့်တဲ့ဆီကျွေးတယ်၊(အဟောင်းပြန်လိုက်တယ်) မသန့်တဲ့ဆီစားပြီးလည်ရတော့ ပိုပြီးစားဖို့ပျက်ဖို့ အခွင့်အရေးရတယ်၊ ပိုပျက်တော့ဆီပိုတုတ်တယ်၊အလုပ်ပျက်ပြီး ၀င်ငွေမကောင်း၊ ၀င်ငွေမကောင်းတော့ မသန့်တဲ့ဆီနဲ့လည်ခိုင်း……..ဒီလိုနဲ့ ဂျာအေး စက္ကူကပ်ပြီး မုန့်လုံးသူ့အမေရိုက်နေတဲ့ အလွဲသံသရာလည်နေတာပါပဲ။